छवि र रेखाको सम्बन्धमा सुधार : छविले शिल्पा र रेखालाई लिएर फिल्म बनाउने ! (भिडियो) « Naya Bato
छवि र रेखाको सम्बन्धमा सुधार : छविले शिल्पा र रेखालाई लिएर फिल्म बनाउने ! (भिडियो)
२८ फाल्गुन ,शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘मंगलम’ले दर्शकको राम्रो साथ पाएको छ। छविराज ओझाले निर्माण गरेको मङ्गलमलाई पारिवारिक प्रेमकथानक फिल्म भनिएको छ। हिम्तवाली नायिकाको रुपमा चिनिएकी नायिका रेखा थापापनि पुर्व पती छविराज ओझाको निर्माणमा बनेको चलचित्र मंगलम हेर्न सिटि सेन्टरको बिग मुभिज पुगेकी थिइन।
मंगलमको प्रेस शो मा पुगेकी नायिका थापा भन्छिन: ‘मन छुने मंगलम, छवि ब्यानरको उत्कृष्ट फिल्म हो। फिल्म एकदम राम्रो बनेको छ। यो चलचित्रले उठाएको विषय निकै संवेदनशील छ। जीवनमा पहिलो पटक म फिल्म हेरेर रोएँ। मलाई फिल्मको हरेक पक्षले छोयो। प्रत्येक परिवार, श्रीमान-श्रीमती र प्रेमि प्रेमिकाले हेर्नुपर्ने फिल्म मंगलम बनेको छ।’
मंगलम हेरेर रेखा मात्रै होइन, बिग मुभिज फिल्म हलमा उपस्थित सबै दर्शक रोए। नवल नेपालले निर्देशन गरेको यो फिल्म पारिवारिक प्रेम कथामा आधारित रहेको छ। चलचित्रमा शिल्पा, पुष्पसँगै नायक पृथ्वीराज प्रसाईँ, नीर शाह, मिथिला शर्माको मुख्य भूमिकामा रहेको छ। त्यस्तै नायिका साम्राज्ञी केमियो भूमिकामा देखिएकी छन्। हेर्नुस् पूरा भिडियो